Isikhulu ngasinye sokuqala siqala ukubhekana nokukhetha: amafutha ahlanzekile angagcini ukukhetha. Ukukhetha kuyinkimbinkimbi kakhulu, futhi ngabe kufanele kwenziwe nhlobo, ake sibone.
Empeleni, lezi zinhlobo zamafutha ziwusizo ngoba ziqukethe ama-acid acids ahlukahlukene, okuyimfuneko kumzimba. Kodwa yiziphi izinhlobonhlobo ezisezinhlobonhlobo? Kukholelwa kakhulu ukuthi amafutha angagcini aqukethe inani elikhulu lemisebenzi ewusizo, Akuhlanjululwa. Noma kunjalo, lokhu kuyiphutha elikhulu lamakhosikazi. Umehluko phakathi kwalezi zinhlobonhlobo zamafutha (ezingabuyekezwa nge-iso iso) ukuqeda iphunga nokunambitha ngesikhathi sokuhlanza okujulile. Izimfanelo ezisele nezemihle zingagwetshwa kuphela uma ku-laboratory ekhethekile.
Okokuqala, amafutha ahlanjululwayo akahambisani nokudla okunye kwamanye amazwe, awaphazamisi ukunambitheka nokuhogela, njll. Akungathathi hlangothi ngokuphelele. Inqubo yokuhlanza amafutha e-sunflower, ngokuqondile, yingakho kubalulekile ukulungiselela ukudla ngaphandle kokuphazamisa izakhiwo zayo ze-organoleptic.
Inqubo yokuhlanza amafutha kuze kube yimanje ingenziwa ngezindlela ezimbili: ukuhlanzwa kwamakhemikhali nokusebenzisa izikhangiso. Kumelwe ngitshele ukuthi iminyaka engaba ngu-150 kuphela indlela yokuqala esetshenzisiwe, kusukela Kuyabizi futhi kuyashesha ngokwanele. Uma wesaba ukuthi ngamafutha ahlanzekile ungathola amakhemikhali anobuthi etafuleni , ungakhathazeki. Enqubo yokuhlanza, kusetshenziselwa amakhemikhali alkaline kuphela angalimazi umzimba.
Ngaphandle kokuntula ukunambitheka nokuphunga, amafutha ahlanziwe enqubo yokuhlanza athola izimfanelo ezengeziwe . Isibonelo, ngesikhathi sokupheka izitsha, amafutha ahlanzekile afinyelela ekugcineni kokubhema ngokuhamba kwesikhathi okungakapheli. Ngakho-ke, lokhu kunomphumela omuhle ekudambiseni ukupheka, impilo yompheki kanye nokuhlanzeka kwemvelo.
Lapho amafutha eshiswa, ama-radicals nama-carcinogenic free . Ngakho amafutha ahlanzekile afinyelela endaweni ephakeme yokushisa kakhulu isikhathi esingaphezu kokungagcwaliseki. Kulokhu kungaphetha ngokuthi amafutha ahlanziwe afaneleka ukupheka ukudla emazingeni aphezulu okushisa.
Yiqiniso, umuntu akufanele agqithe iqiniso lokuthi ukushisa kwamafutha okushisa kuncike ezintweni eziningi (ubukhulu be-pan yokuthambisa noma esinye isitsha, ukushisa okushisayo, ngisho nezimo zemvelo), ngakho-ke iqiniso lokufinyelela endaweni ephakeme yokufudumala i-subjective point.
Ngaphezu kwalokho, amafutha ahlanjululwe awunayo impahla enjalo ephihlizayo njengoba engagcwaliswa. Into ewukuthi ukucubungula okujulile, hhayi kuphela izinto ezihambisa iphunga kumkhiqizo, kodwa futhi ingxenye yesikhewu isuswa emafutheni. Yingakho lapho uxhumane nomswakama oshisayo, amafutha ahlanzekile akakhohlisi noma "amanga".
Ngakho-ke, kungaphethelwa ukuthi amafutha ohlotshisiwe we-sunflow afanele kunoma yikuphi ukwelashwa okushisayo kwemikhiqizo. Kuyo ungakwazi ukuthosa, ukucheka okujulile, ukubhaka kuhhavini nokunye. Kodwa izinhlobo ezingafani ezingamafutha zifanelekile ama-saladi namasiki angenawo ukushisa. Izofaka ukunambitheka nokuvutha okungavamile ezitsha zakho.
Kuzo zonke ezingenhla, kucacile ukuthi asikho isidingo sokukhetha phakathi kwezinhlobo ezimbili zamafutha, kungcono ukuthi ipulazi linamafutha ahlanjululwe futhi angenasiphelo. Ukusebenzisa kuphela kumele kube okulungile.
Noma yimuphi umhlalaphansi kufanele azi ukuthi noma yikuphi amafutha owasebenzisa, ungakwazi ukupheka ukudla kanye kuphela. Ngesikhathi sokushisa ngamafutha, i-aroilein yakhiwa - into edlalwa yi-carcinogenic, umphumela wayo ukhulula ngokushisa okulandelayo. Ngakho-ke, emva kokupheka, isitsha kufanele sihlanzwe kahle emanzini namafutha.
Ake sibale ukuthi mangaki amakhalori encelweni yenkukhu
Usawoti wokudla olwandle: futhi futhi mayelana nezinzuzo zayo
Namafutha esundu: Ingozi kanye nezinzuzo